🥇 ▷ AMD: Radeon RX 5700 ma gaarayaan 110ºC? Waligaa ha iloobin! ✅
AMD: Radeon RX 5700 ma gaarayaan 110ºC? Waligaa ha iloobin!
In kasta oo tayada AMD Radeon RX 5700 iyo RX 5700 XT, kaararka garaafyada lagu dhaleeceeyay isticmaalka xalka qaboojinta… Frankly xun.
Gaar ahaan hadda oo aan aragno xalalka ugu horreeyay ee loogu talagalay in lagu garaaco suuqa. Meesha aad ka arki karto qaar ka mid ah moodooyinka 20 digrii (° C) ka qaboojiye ka ah soo-saaraha tixraaca soo-saaraha.
AMD Radeon 5700 aad ayey u kulushahay? – Khilaafaadkan oo dhan awgood, AMD waxay hadda noqotay mid dadwaynuhu isku dayayaan inay sharaxaan xaaladda.
Sidaa darteed, Mithun Chandrasekhar, maamulaha sare ee Radeon Tech, wuxuu hadda daabacay sharraxaad dheer oo faahfaahsan.
Bogagga Mithun ayaa ku daabacay in soo-saareyaashu ay tixgalinayaan dhammaan akhriska dareemayaasha ee ku yaal dhammaan GPU-da. Marka “Si sir ah ula soco una samee waxqabadka toosan iyadoo laga jawaabayo waxqabadka chip waqtiga dhabta ah.“
Intaa waxaa sii dheer, maareeyuhu sidoo kale wuxuu yidhi, “Annaga oo kaashanayna dareemayaasha, waxaan sidoo kale leenahay awood aan ku garto ” Spot Hot ” oo ku yaal GPU dhinta.”
Taasi waa, halkii laga hirgalin lahaa moodel keli talis ah oo hoos u dhigaya jeerrada GPU. Radeon RX 5700 ee cusubi wuxuu ku socon doonaa heerar sare ilaa dareemayaashu ka soo qaadayaan 110ºC Hotspot.
Marka la soo koobo, waa wax iska caadi ah AMD kaararka naqshadeeyayaasha inay gaaraan 110ºC! Tani, marka lagu jiro xaalado baahi badan leh, sida Ciyaar
Si kastaba ha noqotee, tani sharraxaysa sababta Sapphire cusub iyo ASUS ‘Custom’ xalalka xallinta ay u gaadhaan isku mid ama wax ka badan… heerkul aad u hooseeya! In kasta oo AMD ay u aragto inay tahay wax caadi ah, haddana 110ºC waa heer kulka cabsi leh oo inta badan saameyn ku yeelan kara nolosha kaarka sawirrada.
Jid ahaan, waa heerkulka saxda ah haddii aad rabto inaad wax ku karsato kombuyutarkaaga inta aad sugeyso ciyaar lagu soo dhejiyo.